दुखद घटना Archives - Page2of3- Enepali Online
Category: दुखद घटना
काठमाण्डु, २९ फागुन – त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सोमबार ४९ जनाको ज्यान जानेगरी भएको एसबी २११ उडान दुर्घटना काठमाण्डु विमानस्थल एयर ट्राफिक कन्ट्रोल (एटिसी) को गलत निर्देशनले भएको युएस बंगला एयरलाइन्सले जनाएको छ । विमान र विमान चालकमा कुनै समस्या नदेखिएको अवस्थामा एटिसीको गलत निर्देशनका कारण जहाज हुन पुगेको युएस बंगला एयरलाइन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इमरान असिफले दाबी गरेका हुन् । ‘हाम्रो जहाजमा कुनै प्राविधिक खराबी थिएन तर काठमाण्डु टावरका एटिसी अधिकारीले गलत सिग्नल दिएपछि चालक…
"नेपालको ट्राफिक कन्ट्रोललाई गलत आरोप लगाउँदै बंगला एयरलाइन्सले यसो भन्यो"
काठमाडौं । सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा युएस बंगला एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा २२ जना नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा राखिएको शव बुझ्न आएका आफन्तले दिएको जाहेरीका आधारमा ज्यान गुमाएका सबै नेपालीहरुको ठेगाना पनि पहिचान भएको छ । २२ जना मृतकहरुमध्ये १२ जना बंगलादेशमा एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीहरु रहेका छन् भने दुई जना कतारबाट बंगलादेश हुँदै नेपाल फर्किदै गरेका कामदार र बाँकी बंगलादेशमा विभिन्न तालिम तथा कार्यक्रममा भाग लिएर फर्किएकाहरु रहेका छन् । मृतकहरुको ठेगाना…
"विमान दुर्घटनाः २२ नेपालीको निधन, सबैको ठेगाना पहिचान(सुचिसहित)"
काठमाडौं: ‘म काठमाडौं जाँदै छु ममी, तपाई कहिले फर्कनुहुन्छ?’ सोमबार बिहानै ढाकाबाट प्रिन्सी धामीले आमालाई फोन गरेकी थिइन्। ‘म चाँडै आउँछु छोरी। राम्रोसँग जाउ। पुगेपछि कल गर्नु, टेक केयर,’ दुबईमा रहेकी शोभाले छोरीलाई जवाफ फर्काइन्। आमासँगको फोन संवादको केहीबेरमै प्रिन्सी चढेको विमान ढाकाबाट काठमाडौंका लागि उड्यो। काठमाडौंमा आफू उत्रेको जानकारी दिन नपाउँदै उनी चढेको विमान त्रिभुवन विमानस्थलमा दुर्घटनाग्रस्त भयो। दुर्घटनापछि उद्दार टोलीले उनलाई सिधै सिनामंगलस्थित केएमसी अस्पताल पुर्यायो। ‘म प्लेन क्र्यासमा परेर केएमसी अस्पतालमा आइपुगेको…
"‘केएमसीमा छु, आमालाई भन्दिनुहोला,’ फोनमा यति बोलेकी प्रिन्सी आइसियुमा: दुबईबाट फर्केकी शोभा भगवान पुकार्दै…"
२९ फागुन – ५० जनाको ज्यान जानेगरी सोमबार, फागुन २८ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटनाग्रस्त भएको युएस बांग्ला एयरलाइन्सको विमानका पाइलट अबिद सुल्तान जीवित रहेको जानकारी ढाकास्थित कम्पनीको कार्यालयले दिएको छ । जहाजकी को-पाइलट पृथुला रशिद काठमाडौँ मेडिकल कलेज हस्पिटलमा उचारको क्रममा मृतक भएको पनि उक्त बायु सेवा कम्पनीले जनाएको छ । ७८ सीट भएको बम्बार्डियर ड्याश ८ क्यु ४०० जहाज सोमबार बंगलादेशको राजधानी ढाकाबाट ६७ यात्री र ४ जना चालक दलका सदस्य लिएर काठमाडौँका…
"हिजो दूर्घटनाग्रस्त भएको बिमानबारे नयाँ खुलासा, चालक पनि जिवितै –"
काठमाडौं–सोमबार नेपालमा यू.एस.–बङ्लाको विमान अवतरणको क्रममा दुर्घटना भयो । उक्त विमान दुर्घटनामा २२ नेपालीसहित ४९ जनाको ज्यान गयो । यस्तै २२ जना घाइतेको काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । दुर्घटनाग्रस्त विमान क्यानडाको मोन्ट्रियलस्थित बम्बार्डिएर इन्कले बनाएको हो । यसो त सोही कम्पनीको बम्बार्डिएर च्यालेन्जर ६०४ निजी जेट विमान अघिल्लो दिन इरानमा पनि दुर्घटना भएको थियो । सो दुर्घटनामा विमानमा सवार सबै ११ जनाको मृत्यु भएको थियो । इरानमा दुर्घटना भएको जेट विमान टर्किस व्यापारी…
"एउटै कम्पनीको विमान : आइतबार इरानमा, सोमबार नेपालमा दुर्घटना"
जमिन छुनुअघि नै जहाज थर्रर हल्लिएको थियो विभिन्न ट्राभल एजेन्सीका हामी बाह्र जना एउटा कार्यक्रममा भाग लिन ढाका गएका थियौं। कार्यक्रम सकेर सँगसँगै फर्कंदै थियौं। यूएस बंगलाको जहाज दिउँसो साढे १२ बजे ढाका विमानस्थलबाट उड्यो। जहाज लगभग भरिएको थियो। हामी सबै अगाडिको लहरमा थियौं। पछाडि बंगलादेशमा एमबिबिएस पढिरहेका भाइबहिनी थिए। तीस जनाभन्दा बढी नेपाली थिए कि जस्तो लाग्छ। बंगालीहरू पनि उत्तिकै थिए। धेरै त पहिलोपटक नेपाल घुम्न आउँदै थिए। संख्या यकिन छैन, तर चिनियाँ र…
"युएस बंगला जहाज दुर्घटनामा बाँचेका यात्रु सनम शाक्य भन्छन्ः जमिन छुनुअघि नै जहाज थर्रर हल्लिएको थियो"
काठमाडौं। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटनाग्रस्त विमानमा काठमाडौं आउँदै गरेका यात्रुले ढाकाबाट उड्नुअघि सामाजिक संजालमा पोस्ट गरेका स्टाटसका स्क्रिनसट सार्वजनिक भएका छन् । बंगलादेशी नागरिक राजु रहमानले ती यात्रु सकुशल रहुन् भन्ने कामनासहित ट्वीटरमा ती स्क्रिनसटहरु शेयर गरेका छन् । उनले शेयर गरेका स्क्रिनसटमा उल्लेख भएअनुसार ती युगल जोडीहरु कोही हनिमुन त कोही आफ्ना प्रियजनका साथ घुम्न आउँदै थिए । हेर्नुहोस् स्क्रिनसटहरु –
"फेसबुकमा यस्तो पोस्ट गरेर ढाकाबाट काठमाडौं उडेका थिए ‘युगल जोडीहरु’"
काठमाडौं । यूएस बंगला एयरलाइन्सको विमान त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटना हुँदा ४९ जनाको मृत्यु भएको छ । विमानमा रहेका २१ जना घाइते भएका छन् । एकजनाको अवस्था अज्ञात छ । विमान दुर्घटनाअघि कन्ट्रोल रुम र पाइलटबीच भएको सम्वाद सावर्जजिक भएको छ । यो सम्वादमा ‘जिरो-२’ र ‘२-जिरो’ मध्ये कुन ठाउँबाट विमान अवतरण गर्ने भन्नेबारे लामै कुराकानी भएको छ । तर, अन्तिममा कन्ट्रोल रुमले रन वे जिरो-२ मा अवतरण गर्नु अनुमति दिन्छ ।…
"दुर्घटनाअघि पाइलटलाई कन्ट्रोल रुमको चेतावनीः म फेरि भन्छु, त्यसो नगर्नुस्- सुन्नुहोस अडियो"
काठमाडौं । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले मेयर ममता प्रसाद चौधरीमाथि अज्ञात समूहद्वारा खुकुरी प्रहारपछि गोली प्रहार गरिएको छ । उनलाई सोमबार साँझ मोटरसाइकलमा आएको अज्ञात समूहले गोली प्रहार गरेको हो । प्रदेश नं. ७ प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआईजी माधवप्रसाद नेपालले चौधरीलाई गोली प्रहार भएको पुष्टि गरे । उनको स्थानीय घोडाघोडी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । अहिले उपचारका लागि अन्यत्र लाने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । मेयर चौधरीको हालको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताईएको छ । थप विवरण…
"मेयर ममता प्रसाद चौधरीमाथि अज्ञात समूहद्वारा खुकुरी पछि गोली प्रहार, चिन्ताजनक अवस्था"
काठमाडौँ । युएस–बंगला एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा पर्नुमा पाइलट दोषी रहेको त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । सोमबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरेर विमानस्थल कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलमा रहेका एयर ट्राफिकको निर्देशन अवज्ञा गरेकाले विमान दुर्घटनामा परेको जनाएको हो । सोमबार दिउँसो २ बजेर १८ मिनेटमा धावनमार्गको पूर्वतर्फ दुर्घटनामा परेको जहाजमा ६७ जना चालक दलका सदस्यसहित ७१ जना सवार थिए । त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रवन्धक राजेन्द्रकुमार क्षेत्रीले दक्षिणतर्फबाट ल्यान्ड गर्न निर्देशन दिँदा दिँदै पाइलटले अटेरी गरेकाले यति ठुलो दुर्घटना…
"दर्जनौ नेपाली तथा बंगाली र एक चाइनिजको ज्यान लिने आजको प्लेन दुर्घटनामा पुरापुर पाइलट नै दोषी रहेको त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रवन्धक राजेन्द्रकुमार क्षेत्रीको दावी, हुदैन भन्दा भन्दै उत्तर तर्फबाट जवर्जस्ती ल्याण्ड गर्दा झन्डै अर्को प्लेनसंग पनि जुधेको थियो – ल्याण्ड हुनु अगाडी एयर ट्राफिकसंग के-के कुरा भएको थियो ? जान्नुहोस"